Global Voices teny Malagasy » Sary Misy Ireo Hosodoko Amin’ny Rindrindra Ao Kyiv Hita Amin’ny Sarintany Ifarimbonana Antserasera · Global Voices teny Malagasy » Print
Sary Misy Ireo Hosodoko Amin'ny Rindrindra Ao Kyiv Hita Amin'ny Sarintany Ifarimbonana Antserasera
Voadika ny 11 Desambra 2015 4:48 GMT 1	 · Mpanoratra Tanya Lokot Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Mediam-bahoaka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Azo jerena amin'ny sarintany ifarimbonana ihany koa ny hosodoko amin'ny rindrina nataon'ny fikambanana asa kanto an-dalambe Okrainiana Interesni Kazki. Sary avy amin'ny ilgorgo.com, CC-BY 3.0.
Manjary malaza dia malaza ao Okraina ny sary hosodoko an-dalambe sy amin'ny rindrina: mitondra vaovaon'ny rindrina vaovao ao an-tanàna na iray hafa feno vokatry ny sangan'asa famoronan'ireo mpanakanto sasany isan-kerinandro. Olom-pirenena ao Kyiv iray no miezaka manamora ho an'ireo mpitady zavakanto hametraka marika ny sanganasa vaovao rehetra miseho ao an-dalamben'ny renivohitra.
Namorona sarintany an-tserasera misy ireo sary hosodoko rehetra amin'ny rindrina nisongadina tao an-tanàna nandritra ny roa taona lasa i Sergii Oryshkevych. Efa ahitana toerana maherin'ny 30 voamarika sahady ny sarintany ifarimbonana, ao afovoan-tanàna ny ankamaroan'izy ireo.
Sarintany antserasera misy ny sary hosodoko amin'ny rindrina mampiseho ny fitangoronan'ny asa kanto ao afovoan-tanàna. Sary avy amin'ny kyivmural.com.
Ny zavatra tsirairay eo amin'ny sarintany dia mampiseho tsara ny misy ny toeran'ny sary hosodoko ary arahina sary mipoitra rehefa manindry ny marika ny mpiserasera.
Ity sary hosodoko manintona ahitana goaika ity dia ao amin'ny araben'i Reytarska — akaikin'ny tokontany kely iray somary miafina iveloman'ireo goaika vitsivitsy ao anaty tranom-borona malalaka. Sary avy amin'ny kyivmural.com
Toa mihevitra ireo mpamorona ny habaka fa fandrosoana tsara ho an'i Kyiv ireo sary hosodoko amin'ny rindrina ireo, ary nanamarika fa nitarika ireo mpanakanto iraisampirenena maro hametraka ny sangan'asan'izy ireo anaty lisitra ny fironana vaovao (sy ny fahavononan'ny rindrina azo ampiasaina ho tabilaon'hosodoko).
Nandritra ny taona 2014-2015, nandravaka trano maherin'ny 30 tamin'ny sary hosodoko amin'ny rindrina ireo mpanakanto avy ao Okraina, Espaina, Arzantina, Aostralia, Alemaina, Angletera ary Portiogaly — ary mbola mitohy izany. Efa lasa firavaka sarobidin'i Kyiv ireo sary hosodoko ary mety ho lasa marika fanintonana amantarana azy.
Manantena hanampy hosodoko maromaro ao amin'ny sarintany i Gryshkevych atsy ho atsy, ary mangataka amin'ireo mpiserasera aterineto mba handefa torohevitra aminy amin'ny toerana vavao ahitana asa andalam-pamitana sy ny sarin'ny zavakanto an-dalambe efa vita tanteraka.
Novitaina tao amin'ny rindrina ao akaikin'ny kianja Kontraktova ao amin'ny Podil manan-tantara ity sarin-dehilahy ity herinandro vitsy lasa izay. Sary avy amin'ny kyivmural.com
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/12/11/77436/
 sarintany ifarimbonana, : http://kyivmural.com/?lang=en